आफ्नो मनपर्ने जीन्स समय समयमा frayed, वा गल्ति भने एक पीठ मा एक नङ टाँसिएको बारेमा भताभुङ्ग, चिन्ता छैन! आफ्नो कला, एक सानो समय र उत्पादन बचत गर्न ठूलो इच्छा: आफ्नो आगरणको आवश्यक छैन धेरै लागि। जिन्स मा सहायता प्याच आउन र, मलाई विश्वास छ, यो नै समय मा तपाईं आफ्नो मनपर्ने प्यान्ट, मर्मत हुनेछ तिनीहरूलाई नयाँ जीवन दिन र आफ्नो दराज गर्न शैली «गरे हात» नयाँ लुगा थपियो सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ।
शैली को विकल्प
मरम्मत सुरु गर्नु अघि यो तपाईं तिनीहरूलाई लगाउने योजना के संग, तपाईंको प्यान्ट अवस्थित जारी हुनेछ के शैली निर्णय गर्न राम्रो हुनेछ। किनभने यो महत्त्वपूर्ण बिन्दु, विधि र उपकरण मा crucially निर्भर तिनीहरूलाई मर्मत हुनेछ। शैली "आकस्मिक" एक प्याच ध्यान आकर्षित गर्न, सकेसम्म अदृश्य बनाउन, अमेरिकी वेस्टर्न को शैली मा जिन्स भिन्नता, उज्ज्वल प्याच जोड हुन सक्छ तिनीहरूलाई थप रंगीन बनाउन oblige, र यसरी।
सिलाई पैच को सबै भन्दा साधारण र लोकप्रिय केही तरिकाहरू विचार गर्नुहोस्। को जीन्स सानो र एउटा inconspicuous स्थान मा स्थित मा प्वाल, तपाईं छाला को रंग उठाएर माथि, यो सी, वा प्रयोग अदृश्य प्याच बनाउन प्रयास गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ भने डेनिम को छोटा टुक्रा बाँचे। तपाईं स्क्रापहरू रोल भने, तपाईं फिर्ता pockets अन्तर्गत कपडा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र एक ठाउँमा अन्य कुनै पनि सामाग्री सी गर्न। यसो गर्न, तपाईं खल्ती को पिन माथिल्लो किनारा छुरी हान्नु गर्नुपर्छ, र तेज कैंची संग, कपडा इच्छित टुक्रा कटौती यस मामला मा, जीन्स मा एक टालो एक सही फिट र रंग र बनावट हुनेछ। डेनिम जो तपाईं darn वस्तुतः अदृश्य गर्न अनुमति दिन्छ एक पर्याप्त ठूलो भएको फिलामेंट्स बीच, खाली संग विशेष विकर्ण जाल छ, त्यसैले यो मरम्मत विकल्प पनि ठाउँ छ विशेष गरी यो undistinguished छ के आकर्षित गर्छ।
को जीन्स मा प्याच अदृश्य प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाईं यसलाई सजावटी बनाउन मा आवेदन फारम, साथै beading वा तस्मा सजाउनु। एक अनुप्रयोग वा कढाई गर्न यो नीरस थियो, यो बनाउन सम्भव छ अर्को दुई वा तीन, र त्यसपछि आफ्नो जीन्स एक उज्ज्वल डिजाइन कला काम हुनेछ। जवान मानिसहरू बीच धेरै लोकप्रिय साँचो छाला बनेको जिन्स मा एक टालो हो। विशेष advantageously, तिनीहरूले फिर्ता pockets मा पहनने खोज्न। उदाहरणका लागि, पुरुष जीन्स hipsters सजावट को रूप मा विभिन्न स्थानहरुमा केही थप छाला पैच तिनीहरूलाई फैलाउन भने, थप मूल हुनेछ। अर्को सुझाव: जिन्स मा प्याच सधैं सिलना गर्नुपर्छ, गोंद रूपमा टाँस्न प्रयास छैन र त्यो पहिलो धुने बाँच्न थिएन।
को ultramodern विधि
तपाईंको जीन्स सुरक्षित गर्न अर्को, एकदम बोल्ड तरिका हो। होल सी सक्दैन, बरु razlohmatit किनारा विस्तार र यसलाई अझ बढाउन गर्न, र यदि वांछित टुक्रा को एक जोडी थप्नुहोस्। आफ्नो मनपर्ने कुरा संग यति असभ्य तरिका गरेर, तपाईं एक फेसनदार प्राप्त जीन्स, च्यातेर धेरै दशकहरु लागि फैशन catwalks छोड्न नगर्ने।
त्यसैले, यो जिन्स मा प्वाल अब बिल्कुल स्पष्ट छ - कि आतंक कुनै कारण छ, र उदास, स्थिति अलि कल्पना र कठिन काम देखाउँदै सजिलै र चाँडै सही हुन सक्छ।
महिला सुशील टोपी। फैशन बुना टोपी: बुनाई योजना
कान मा "सुरुङ" - विन्डो शैली
विवाह लागि विवाह फोटोग्राफर लागि पुरुष सूट
फेसन गुरु, व्यापार-महिला, र यो-केटी - Aysel Trudel - एक महिला बारे सबै यो
प्रोन्सरल शैली आन्तरिक मा: फोटो, वर्णन
Savoy बन्दागोभी के खाना पकाउनु? Savoy बन्दागोभी व्यञ्जन: व्यञ्जनहरु
परिवर्तनको गिरजाघर (Tolyatti) - नयाँ पटकसम्म साइन
आँखा मेकअप कसरी वृद्धि गर्न
Extrapulmonary क्षयरोगका: कारणहरू, लक्षण र उपचार